Huawei မှ Operating System အသစ်ဖြစ်သော Harmony OS အား မိတ်ဆက် | MyTech Myanmar
Huawei မှ Operating System အသစ်ဖြစ်သော Harmony OS အား မိတ်ဆက်
Harmony OS မှ အသိဉာဏ်မြင့်မားသည့် အတွေ့အကြုံအား အမျိုးမျိုးသော သုံးစွဲသူများထံသို့ ပေးအပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Huawei Developer Conference ၌ Huawei သည် microkernel ပေါ်တွင် အခြေခံထားသည့် operating system အသစ်တစ်ခုအား မိတ်ဆက်လိုက်သည်။ အဆိုပါ operating system သည် ထုတ်ကုန် နှင့် အခြေအနေအမျိုးမျိုးတွင် ပြီးပြည့်စုံသော သုံးစွဲသူ အတွေ့အကြုံအား ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Huawei Consumer Business Group ၏ CEO ဖြစ်သည့် Richard Yu မှ ကုမ္ပဏီမှ ယခုကဲ့သို့ OS အသစ် ပြုလုပ်ရခြင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး “ကျွန်တော်တို့ဟာ အခုဆိုရင် ပြီးပြည့်စုံပြီး အသိဉာဏ်မြင့်မားတဲ့ ထုတ်ကုန်၊ အတွေ့အကြုံတွေကို လိုလားလျှက်ရှိတဲ့ ခေတ်မှာ နေနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း အခုလိုမျိုး လိုအပ်ချက်ကို ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ပိုမိုအဆင့်မြင့်တဲ့ cross-platform လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပါဝင်တဲ့ operating system တစ်ခုကို ထုတ်လုပ်ဖို့ လိုအပ်လာတယ်ဆိုတာ သိရှိလာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ဘယ်လို အခြေအနေမျိုးမှာမဆို ထုတ်ကုန် နဲ့ platform အမျိုးမျိုးမှာ သုံးဆွဲလို့ရပြီး သုံးစွဲသူတွေကို နှောင့်နှေးမှု အနည်းဆုံး နဲ့ ခိုင်မာတဲ့ လုံခြုံမှုတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ့် OS တစ်ခုကို လိုအပ်လာပါတယ်။” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဒါက HarmonyOS နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ထားရှိထားတဲ့ ရည်မှန်းချက်ပါ။ HarmonyOS ကဆိုရင် အခြားသော Android နဲ့ iOS တွေနဲ့ သွေဖယ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းက microkernel အခြေပြုထားခြင်းဖြစ်ပြီး မည်သည့် အခြေအနေမျိုးမှာမဆို အချောမွေ့ဆုံးသော သုံးစွဲသူ အတွေ့အကြုံကို ပေးအပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းမှာ ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး လုံခြုံတဲ့ ဗိသုကာ အတတ်ပညာ ပါဝင်တာဖြစ်ပြီး ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးနဲ့ ချောမွေ့စွာ ပူးပေါင်းမှုကို ပြုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Developer တွေ အနေနဲ့လည်း ကိုယ်ပိုင် app တွေကို တစ်ခါတည်း ဖန်တီးနိုင်ပြီး အမျိုးမျိုးသော ထုတ်ကုန်တွေ အပေါ်မှာ လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
သမာရိုးကျအားဖြင့် Operating system အသစ်သည် ထုတ်ကုန်အသစ်များနှင့် အတူ မိတ်ဆက်လေ့ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၁၀ နှစ် မှ စတင်ကာ Huawei သည် အသိဉာဏ်တု မှ လူနေမှုဘဝများ၏မည်သည့် အနေအထားမျိုးတွင်မဆို လွယ်ကူစွာ ပူးပေါင်းပါဝင်လာမည့် အနာဂတ်အား ပုံဖော်ခဲ့ကြပြီး အဆိုပါ အတွေ့အကြုံအား မည်ကဲ့သို့ ပေးအပ်နိုင်မည်ကို ရှာဖွေခဲ့ကြသည်။
HarmonyOS သည် ပေါ့ပါးကျစ်လစ်သည့် operating system တစ်ခုဖြစ်ပြီး အင်အားကြီးမားသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များပါဝင်သည်။ ထို့အပြင် ၎င်းသည် smart watches ၊ smart screens ၊ in-vehicle systems နှင့် smart speakers များ ကဲ့သို့သော smart device များတွင် အသုံးပြုနိုင်မည့် ပထမဆုံးသော operating system ဖြစ်သည်။ ယခုကဲ့သို့သော အကောင်အထည်ဖော်မှုမှ စတင်ပြီး Huawei သည် ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးပေါ်တွင် အသုံးပြုနိုင်သည့် ecosystem တစ်ခုအား တည်ထောင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး လုံခြုံစိတ်ချရပြီး အားကိုးရသည့် ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် အသိဉာဏ်မြင့်မားသည့် အတွေ့အကြုံများအား မည်သည့်ထုတ်ကုန်များ၌မဆို ဖန်တီးပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်လျှက်ရှိသည်။
Harmony OS- ထင်ရှားသည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက် ၄ မျိုး
Harmony OS သည် သုံးစွဲသူများအား ထင်ရှားသည့် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက် ၄ မျိုး ပေးစွမ်းနိုင်ရန်အတွက် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ဖန်တီးထားသည်။
၁. ချောမွေ့ပြေပြစ်မှု (Seamless)- Distributed architecture ဖြင့် ဖန်တီးထားသည့် ပထမဆုံးသော Device OS ဖြစ်ပြီး ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးတွင်ချောမွေ့ပြေပြစ်သည့် အတွေ့အကြုံအား ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်
Distributed Architecture နှင့် Distributed Virtual Bus နည်းပညာများအား အခြေပြုထားသည့် Harmony OS သည် ဝေမျှချိတ်ဆက်နိုင်သည့် ပလက်ဖောင်း တစ်ခု (shared communication platform) ၊ ဖြန့်ဝေထားသည့် ဒေတာ စီမံခန့်ခွဲမှု (distributed data management) ၊ ဖြန့်ဝေထားသည့် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အစီအစဉ် (distributed task scheduling) နှင့် အမြင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရံပစ္စည်းများ (virtual peripherals) များအား ပေးအပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Harmony OS ဖြင့် app developer များသည် distributed app များအတွက် နောက်ခံနည်းပညာများအား နှင့် ပတ်သက်ပြီး စိတ်ရှုပ်စရာမလိုအပ်ဘဲ ၎င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင်ဝန်ဆောင်မှုအယူအဆများပေါ်တွင်သာ အာရုံထားနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Distributed App များ ထုတ်လုပ်ဖန်တီးရာတွင် ယခင်နှင့် ယှဉ်လျှင် ပိုမိုလွယ်ကူစေမည်ဖြစ်သည်။ Harmony OS ပေါ်တွင် အခြေပြုဖန်တီးထားသည့် app များသည် ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးပေါ်တွင် လွယ်ကူချောမွေ့စွာ အသုံးပြုစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၂. ချောမွေ့မှု (Smooth): Deterministic Latency Engine နှင့် high-performance IPC
HarmonyOS သည် Deterministic Latency Engine နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်မြင့်မားသည့် Inter Process Communication (IPC) ဖြင့် လုပ်ဆောင်ချက်မကောင်းမွန်သည့် စိန်ခေါ်မှုများအား သိရှိစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Deterministic Latency Engine သည် လုပ်ငန်းပြီးပြတ်မှုဆိုင်ရာ ဦးစားပေးမှု နှင့် အချိန်ကန့်သတ်ချက်များ ပါရှိသည့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများအား ကောင်းမွန်စွာ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အရင်းအမြစ်များသည် ပိုမိုအရေးကြီးသည့် လုပ်ဆောင်ချက်များအား သိရှိစေနိုင်ပြီး app များ၏ တုံ့ပြန့်မှု နှောင့်နှေးခြင်းအား လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Microkernel သည် IPC လုပ်ဆောင်ချက်အား လက်ရှိစနစ်များနှင့် ယှဉ်လျှင် ၅ ဆပိုမို မြန်ဆန်စေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၃. လုံခြုံစိတ်ချရမှု (Secure) – Microkernel Architecture သည် လုံခြုံစိတ်ချရမှု နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချမှုအား ပြန်လည်ပုံဖော်
HarmonyOS သည် microkernel ဒီဇိုင်းအသစ်အား အသုံးပြုထားပြီး အဆင့်မြင့် လုံခြုံမှုအား ပေးစွမ်းနိုင်ကာ နှောင့်နှေးမှုအား လျှော့ချပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ microkernel သည် kernel လုပ်ဆောင်ချက်များအား ရိုးရှင်းစေရန် ၊ kernel အပြင်ဘက်တွင်ရှိသော user mode အခြေအနေတွင် system service များအား တိုးပွားစေရန် နှင့် mutual security protection ရရှိစေရန်အတွက် ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ Microkernel သည် Thread Scheduling နှင့် IPC ကဲ့သို့သော အခြေခံကျသည့် ဝန်ဆောင်မှုများအား ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Huawei OS ၏ microkernel ဒီဇိုင်းသည် လုံခြုံမှု နှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအား ပုံဖော်ရန်အတွက် Trusted Execution Environment (TEE) တွင် ပါဝင်သည့် တရားဝင် စစ်ဆေးသည့် နည်းလမ်းအား အသုံးပြုလျှက်ရှိသည်။ တရားဝင်စစ်ဆေးသည့် နည်းလမ်း(Formal Verification Method) သည် စနစ်၏ မှန်ကန်မှုအား သက်သေပြနိုင်မည့် ထိရောက်သော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
HarmonyOS သည် TEE တွင် ပါဝင်သည့် တရားဝင်စစ်ဆေးသည့်နည်းလမ်း (Formal Verification) အား အသုံးပြုသည့် ပထမဆုံးသော OS ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် HarmonyOS microkernel တွင် Linus Kernel နှင့် ယှဉ်လျှင် ပိုမိုနည်းပါးသည့် ကုတ်ဒ် ပါဝင်သဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံရနိုင်သည့် နှုန်းမှာလည်း လျှော့ချပြီးဖြစ်သည်။
၄- ပေါင်းစည်းခြင်း (Unified) – Multi-device IDE သည် app များအား တစ်ကြိမ်တည်း ဖန်တီးနိုင်စေမည်ဖြစ်ပြီး အခြားသော ထုတ်ကုန်များ၌ပါ အသုံးပြုနိုင်စေမည်ဖြစ်
Multi-Device IDE ၊ Multi-Language Unified Compilation နှင့် Distributed Architecture Kit တို့အားဖြည့်ထားသည့် HarmonyOS သည် အမျိုးမျိုးသော screen layout ထိန်းချုပ်မှု နှင့် တုံ့ပြန်မှုများအား အလိုအလျောက် ထိန်းညှိနိုင်ပြီး drag-and-drop control နှင့် preview-oriented visual programming အား ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ အချက်သည် developer များအား ပိုမို ထိရောက်မှုရှိသည့် app များအား ဖန်တီးစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Multi-Device IDE ကြောင့် developer များသည် ၎င်းတို့၏ app များအား တစ်ကြိမ်တည်းဖြင့် ကုဒ်ရိုက်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး အခြားသော ထုတ်ကုန်များပေါ်တွင် အသုံးပြုစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
HUAWEI ARK Compiler သည် Android ၏ virtual machine နှင့် တန်းတူအသုံးပြုနိုင်သည့် ပထမဆုံးသော static complier ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် developer များအား များပြားပြီး အဆင့်မြင့်မားသည့် ဘာသာရပ်များအား စက်ကိရိယာအတွင်းသို့ machine code အဖြစ်သို့ ပေါင်းစည်းစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ များပြားသော ဘာသာစကားရပ်များအား တစ်နေရာတည်း၌ စုစည်းစေရန် အထောက်အကူပြုခြင်းဖြင့် HUAWEI ARK Compiler သည် developer များ၏ ထုတ်ကုန်စွမ်းအား ကောင်းမွန်စွာ တိုးတက်စေမည်ဖြစ်သည်။
တီထွင်သူများ၏ အစီအစဉ် နှင့် ဂေဟစနစ်တိုးတက်မှု
Developer ညီလာခံတွင် Huawei သည် Harmony OS နှင့် ၎င်း၏ kernel တို့နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကြေညာသွားသည်။ HarmonyOS 1.0 သည် ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် မိတ်ဆက်သွားမည့် smart screen ထုတ်ကုန်များတွင် ပထမဦးစွာ ထည့်သွင်းသွားမည်ဖြစ်သည်။ နောက် ၃ နှစ် ခန့်ကြာသည့်အခါတွင် HarmonyOS သည် အကောင်းဆုံးအနေအထားအဖြစ်သို့ ရောက်ရှိသွားမည်ဖြစ်ပြီး smart devices နှင့် wearables များ၊ HUAWEI Vision နှင့် ကားအတွင်းရှိ head unit များ ကဲ့သို့ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သည့် ထုတ်ကုန်များတွင်ပါ အသုံးပြုနိုင်သွားမည်ဖြစ်သည်။
HarmonyOS ၏ အောင်မြင်မှုသည် လျင်မြန်စွာတိုးတက်ပြောင်းလဲနေသည့် app နှင့် developer များ၏ ဂေဟစနစ်ပေါ်တွင် မူတည်လျှက်ရှိသည်။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုနိုင်စေရန်အတွင် Huawei မှ HarmonyOS အား open-source platform အဖြစ် ကမ္ဘာအနှံ့သို့ ဖြန့်ချီသွားမည်ဖြစ်သည်။ Huawei မှ open-source foundation နှင့် open-source community အားလည်း တည်ထောင်သွားမည်ဖြစ်ပြီး developer များနှင့် ပိုမိုနက်နဲသည့် ပူးပေါင်းမှုများအား ထောက်ပံ့သွားမည်ဖြစ်သည်။
တရုတ်ပြည်သည် တောင့်တင်းခိုင်မာသည့် app ဂေဟစနစ် နှင့် များပြားသည့် သုံးစွဲသူ အခြေစိုက်သည့် ဂေဟ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် Huawei သည် Harmony OS ၏ အခြေခံအုတ်မြစ်အား တရုတ်ပြည်ဈေးကွက်အတွင်း၌ ခိုင်မာစွာချသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိ ဂေဟ စနစ်အတွင်းသို့ ဖြန့်ကျက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဆန်းသစ်ပြီး ထူးခြားသည့် တန်ဖိုးများ ပေးအပ်ရန်ဆိုသည့် ဦးတည်ချက်ဖြင့် Huawei သည် ၎င်း၏ ပင်မ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများဖြစ်သော ချိတ်ဆက်မှု ၊ ကင်မရာ နှင့် AI လုပ်ဆောင်ချက်များအား ဝေမျှသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဂေဟစနစ်အတွင်းရှိ မိတ်ဖက်များနှင့် နီးကပ်စွာ အလုပ်လုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး သုံးစွဲသူများအား အကောင်းဆုံးသော အတွေ့အကြုံ အား ပေးစွမ်းနိုင်မည့် app နှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအား ပေးအပ်နိုင်ရန် ကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်သည်။
Harmony OS သည် ဆန်းသစ်သည့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများအား သုံးစွဲသူများ ၊ မိတ်ဖက်များ နှင့် developer များအတွက် သယ်ဆောင်လာမည်ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများအတွက် ၎င်းတို့၏ ဘဝများတွင် အသိဉာဏ်မြင့်မားသည့် အတွေ့အကြုံများအား သယ်ဆောင်လာမည်ဖြစ်သည်။ ကိရိယာများ ထောက်ပံ့နေသည့် မိတ်ဖက်များအတွက် 5G ၊ AI နှင့် IoT များ ကြီးထွားတိုးတက်လာသည့် ခေတ်တွင် အားသာချက်အားများ ကနဦး လက်ဦး ရရှိစေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် HarmonyOS သည် developer များအား နည်းပါးသည့် ရင်းနှီးမြှပ်နှုံ့မှု ၊ မြန်ဆန်ပြီး တီထွင်ဆန်းသစ်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် သုံးစွဲသူများအား ဆွဲဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Richard Yu မှ “ ကျွန်တော်တို့ Harmony OS က ဒီလုပ်ငန်းခွင်ကို ပြန်လည်အားကောင်းလာစေနိုင်ပြီး ဂေဟစနစ်အား ကြွယ်ဝကောင်းမွန်လာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကတော့ သုံးစွဲသူတွေကို တကယ့်ကို ကောင်းမွန်ပြီး များပြားတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ရရှိစေလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့လည်း ကမ္ဘာတစ်လွှားမှာရှိတဲ့ developer တွေကို ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ လက်တွဲပြီးကော ဒီဂေဟ စနစ်ပိုမို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ အားလုံးအတူပူးပေါင်းပြီးတော့ အသိဉာဏ်မြင့်မားတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို သုံးစွဲသူတွေကို အတူတစ်ကွ ပေးအပ်နိုင်ဖို့ အတူတစ်ကွ ကြိုးစားရန် ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
Huawei မှ Operating System အသဈဖွဈသော Harmony OS အား မိတျဆကျ
Harmony OS မှ အသိဉာဏျမွငျ့မားသညျ့ အတှအေ့ကွုံအား အမြိုးမြိုးသော သုံးစှဲသူမြားထံသို့ ပေးအပျနိုငျမညျဖွဈသညျ။
Huawei Developer Conference ၌ Huawei သညျ microkernel ပျေါတှငျ အခွခေံထားသညျ့ operating system အသဈတဈခုအား မိတျဆကျလိုကျသညျ။ အဆိုပါ operating system သညျ ထုတျကုနျ နှငျ့ အခွအေနအေမြိုးမြိုးတှငျ ပွီးပွညျ့စုံသော သုံးစှဲသူ အတှအေ့ကွုံအား ပေးစှမျးနိုငျမညျဖွဈသညျ။
Huawei Consumer Business Group ၏ CEO ဖွဈသညျ့ Richard Yu မှ ကုမ်ပဏီမှ ယခုကဲ့သို့ OS အသဈ ပွုလုပျရခွငျးနှငျ့ ပတျသကျပွီး “ကြှနျတျောတို့ဟာ အခုဆိုရငျ ပွီးပွညျ့စုံပွီး အသိဉာဏျမွငျ့မားတဲ့ ထုတျကုနျ၊ အတှအေ့ကွုံတှကေို လိုလားလြှကျရှိတဲ့ ခတျေမှာ နနေရေတာဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး အခုလိုမြိုး လိုအပျခကျြကို ထောကျပံ့ပေးနိုငျဖို့အတှကျ ကြှနျတျောတို့ အနနေဲ့ ပိုမိုအဆငျ့မွငျ့တဲ့ cross-platform လုပျဆောငျခကျြတှေ ပါဝငျတဲ့ operating system တဈခုကို ထုတျလုပျဖို့ လိုအပျလာတယျဆိုတာ သိရှိလာပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ အနနေဲ့ ဘယျလို အခွအေနမြေိုးမှာမဆို ထုတျကုနျ နဲ့ platform အမြိုးမြိုးမှာ သုံးဆှဲလို့ရပွီး သုံးစှဲသူတှကေို နှောငျ့နှေးမှု အနညျးဆုံး နဲ့ ခိုငျမာတဲ့ လုံခွုံမှုတှကေို ဖွညျ့ဆညျးပေးနိုငျမယျ့ OS တဈခုကို လိုအပျလာပါတယျ။” ဟု ပွောကွားခဲ့သညျ။
“ဒါက HarmonyOS နဲ့ ပတျသကျပွီး ကြှနျတျောတို့ထားရှိထားတဲ့ ရညျမှနျးခကျြပါ။ HarmonyOS ကဆိုရငျ အခွားသော Android နဲ့ iOS တှနေဲ့ သှဖေယျသှားမှာဖွဈပါတယျ။ ၎င်းငျးက microkernel အခွပွေုထားခွငျးဖွဈပွီး မညျသညျ့ အခွအေနမြေိုးမှာမဆို အခြောမှဆေုံ့းသော သုံးစှဲသူ အတှအေ့ကွုံကို ပေးအပျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ ၎င်းငျးမှာ ယုံကွညျစိတျခရြပွီး လုံခွုံတဲ့ ဗိသုကာ အတတျပညာ ပါဝငျတာဖွဈပွီး ထုတျကုနျအမြိုးမြိုးနဲ့ ခြောမှစှေ့ာ ပူးပေါငျးမှုကို ပွုလုပျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ Developer တှေ အနနေဲ့လညျး ကိုယျပိုငျ app တှကေို တဈခါတညျး ဖနျတီးနိုငျပွီး အမြိုးမြိုးသော ထုတျကုနျတှေ အပျေါမှာ လှယျကူစှာ အသုံးပွုစနေိုငျမှာဖွဈပါတယျ။” ဟု ပွောကွားခဲ့သညျ။
သမာရိုးကအြားဖွငျ့ Operating system အသဈသညျ ထုတျကုနျအသဈမြားနှငျ့ အတူ မိတျဆကျလရှေိ့သညျ။ လှနျခဲ့သညျ့ ၁၀ နှဈ မှ စတငျကာ Huawei သညျ အသိဉာဏျတု မှ လူနမှေုဘဝမြား၏မညျသညျ့ အနအေထားမြိုးတှငျမဆို လှယျကူစှာ ပူးပေါငျးပါဝငျလာမညျ့ အနာဂတျအား ပုံဖျောခဲ့ကွပွီး အဆိုပါ အတှအေ့ကွုံအား မညျကဲ့သို့ ပေးအပျနိုငျမညျကို ရှာဖှခေဲ့ကွသညျ။
HarmonyOS သညျ ပေါ့ပါးကဈြလဈသညျ့ operating system တဈခုဖွဈပွီး အငျအားကွီးမားသညျ့ လုပျဆောငျခကျြမြားပါဝငျသညျ။ ထို့အပွငျ ၎င်းငျးသညျ smart watches ၊ smart screens ၊ in-vehicle systems နှငျ့ smart speakers မြား ကဲ့သို့သော smart device မြားတှငျ အသုံးပွုနိုငျမညျ့ ပထမဆုံးသော operating system ဖွဈသညျ။ ယခုကဲ့သို့သော အကောငျအထညျဖျောမှုမှ စတငျပွီး Huawei သညျ ထုတျကုနျအမြိုးမြိုးပျေါတှငျ အသုံးပွုနိုငျသညျ့ ecosystem တဈခုအား တညျထောငျရနျ ရညျရှယျပွီး လုံခွုံစိတျခရြပွီး အားကိုးရသညျ့ ပတျဝနျးကငျြ နှငျ့ အသိဉာဏျမွငျ့မားသညျ့ အတှအေ့ကွုံမြားအား မညျသညျ့ထုတျကုနျမြား၌မဆို ဖနျတီးပေးနိုငျရနျ ရညျရှယျလြှကျရှိသညျ။
Harmony OS- ထငျရှားသညျ့ နညျးပညာပိုငျးဆိုငျရာ လုပျဆောငျခကျြ ၄ မြိုး
Harmony OS သညျ သုံးစှဲသူမြားအား ထငျရှားသညျ့ နညျးပညာပိုငျးဆိုငျရာ လုပျဆောငျခကျြ ၄ မြိုး ပေးစှမျးနိုငျရနျအတှကျ ဒီဇိုငျးပွုလုပျဖနျတီးထားသညျ။
၁. ခြောမှပွေ့ပွေဈမှု (Seamless)- Distributed architecture ဖွငျ့ ဖနျတီးထားသညျ့ ပထမဆုံးသော Device OS ဖွဈပွီး ထုတျကုနျအမြိုးမြိုးတှငျခြောမှပွေ့ပွေဈသညျ့ အတှအေ့ကွုံအား ပေးစှမျးနိုငျမညျဖွဈ
Distributed Architecture နှငျ့ Distributed Virtual Bus နညျးပညာမြားအား အခွပွေုထားသညျ့ Harmony OS သညျ ဝမြှေခြိတျဆကျနိုငျသညျ့ ပလကျဖောငျး တဈခု (shared communication platform) ၊ ဖွနျ့ဝထေားသညျ့ ဒတော စီမံခနျ့ခှဲမှု (distributed data management) ၊ ဖွနျ့ဝထေားသညျ့ လုပျငနျးပိုငျးဆိုငျရာ အစီအစဉျ (distributed task scheduling) နှငျ့ အမွငျပိုငျးဆိုငျရာ အရံပစ်စညျးမြား (virtual peripherals) မြားအား ပေးအပျနိုငျမညျဖွဈသညျ။ Harmony OS ဖွငျ့ app developer မြားသညျ distributed app မြားအတှကျ နောကျခံနညျးပညာမြားအား နှငျ့ ပတျသကျပွီး စိတျရှုပျစရာမလိုအပျဘဲ ၎င်းငျးတို့၏ ကိုယျပိုငျဝနျဆောငျမှုအယူအဆမြားပျေါတှငျသာ အာရုံထားနိုငျစမေညျဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ Distributed App မြား ထုတျလုပျဖနျတီးရာတှငျ ယခငျနှငျ့ ယှဉျလြှငျ ပိုမိုလှယျကူစမေညျဖွဈသညျ။ Harmony OS ပျေါတှငျ အခွပွေုဖနျတီးထားသညျ့ app မြားသညျ ထုတျကုနျအမြိုးမြိုးပျေါတှငျ လှယျကူခြောမှစှေ့ာ အသုံးပွုစနေိုငျမညျဖွဈသညျ။
၂. ခြောမှမှေု့ (Smooth): Deterministic Latency Engine နှငျ့ high-performance IPC
HarmonyOS သညျ Deterministic Latency Engine နှငျ့ လုပျဆောငျခကျြမွငျ့မားသညျ့ Inter Process Communication (IPC) ဖွငျ့ လုပျဆောငျခကျြမကောငျးမှနျသညျ့ စိနျချေါမှုမြားအား သိရှိစနေိုငျမညျဖွဈသညျ။ Deterministic Latency Engine သညျ လုပျငနျးပွီးပွတျမှုဆိုငျရာ ဦးစားပေးမှု နှငျ့ အခြိနျကနျ့သတျခကျြမြား ပါရှိသညျ့ လုပျငနျးဆောငျတာမြားအား ကောငျးမှနျစှာ လုပျဆောငျနိုငျမညျဖွဈသညျ။ အရငျးအမွဈမြားသညျ ပိုမိုအရေးကွီးသညျ့ လုပျဆောငျခကျြမြားအား သိရှိစနေိုငျပွီး app မြား၏ တုံ့ပွနျ့မှု နှောငျ့နှေးခွငျးအား လြှော့ခနြိုငျမညျဖွဈသညျ။ Microkernel သညျ IPC လုပျဆောငျခကျြအား လကျရှိစနဈမြားနှငျ့ ယှဉျလြှငျ ၅ ဆပိုမို မွနျဆနျစနေိုငျမညျဖွဈသညျ။
၃. လုံခွုံစိတျခရြမှု (Secure) – Microkernel Architecture သညျ လုံခွုံစိတျခရြမှု နှငျ့ ယုံကွညျစိတျခမြှုအား ပွနျလညျပုံဖျော
HarmonyOS သညျ microkernel ဒီဇိုငျးအသဈအား အသုံးပွုထားပွီး အဆငျ့မွငျ့ လုံခွုံမှုအား ပေးစှမျးနိုငျကာ နှောငျ့နှေးမှုအား လြှော့ခပြေးနိုငျမညျဖွဈသညျ။ အဆိုပါ microkernel သညျ kernel လုပျဆောငျခကျြမြားအား ရိုးရှငျးစရေနျ ၊ kernel အပွငျဘကျတှငျရှိသော user mode အခွအေနတှေငျ system service မြားအား တိုးပှားစရေနျ နှငျ့ mutual security protection ရရှိစရေနျအတှကျ ဒီဇိုငျးပွုလုပျထားခွငျးဖွဈသညျ။ Microkernel သညျ Thread Scheduling နှငျ့ IPC ကဲ့သို့သော အခွခေံကသြညျ့ ဝနျဆောငျမှုမြားအား ပေးစှမျးနိုငျမညျဖွဈသညျ။ Huawei OS ၏ microkernel ဒီဇိုငျးသညျ လုံခွုံမှု နှငျ့ ယုံကွညျစိတျခရြမှုအား ပုံဖျောရနျအတှကျ Trusted Execution Environment (TEE) တှငျ ပါဝငျသညျ့ တရားဝငျ စဈဆေးသညျ့ နညျးလမျးအား အသုံးပွုလြှကျရှိသညျ။ တရားဝငျစဈဆေးသညျ့ နညျးလမျး(Formal Verification Method) သညျ စနဈ၏ မှနျကနျမှုအား သကျသပွေနိုငျမညျ့ ထိရောကျသော နညျးလမျးတဈခုဖွဈသညျ။
HarmonyOS သညျ TEE တှငျ ပါဝငျသညျ့ တရားဝငျစဈဆေးသညျ့နညျးလမျး (Formal Verification) အား အသုံးပွုသညျ့ ပထမဆုံးသော OS ဖွဈသညျ။ ထို့အပွငျ HarmonyOS microkernel တှငျ Linus Kernel နှငျ့ ယှဉျလြှငျ ပိုမိုနညျးပါးသညျ့ ကုတျဒျ ပါဝငျသဖွငျ့ တိုကျခိုကျခံရနိုငျသညျ့ နှုနျးမှာလညျး လြှော့ခပြွီးဖွဈသညျ။
၄- ပေါငျးစညျးခွငျး (Unified) – Multi-device IDE သညျ app မြားအား တဈကွိမျတညျး ဖနျတီးနိုငျစမေညျဖွဈပွီး အခွားသော ထုတျကုနျမြား၌ပါ အသုံးပွုနိုငျစမေညျဖွဈ
Multi-Device IDE ၊ Multi-Language Unified Compilation နှငျ့ Distributed Architecture Kit တို့အားဖွညျ့ထားသညျ့ HarmonyOS သညျ အမြိုးမြိုးသော screen layout ထိနျးခြုပျမှု နှငျ့ တုံ့ပွနျမှုမြားအား အလိုအလြောကျ ထိနျးညှိနိုငျပွီး drag-and-drop control နှငျ့ preview-oriented visual programming အား ထောကျပံ့ပေးနိုငျမညျဖွဈသညျ။ အဆိုပါ အခကျြသညျ developer မြားအား ပိုမို ထိရောကျမှုရှိသညျ့ app မြားအား ဖနျတီးစနေိုငျမညျဖွဈသညျ။ Multi-Device IDE ကွောငျ့ developer မြားသညျ ၎င်းငျးတို့၏ app မြားအား တဈကွိမျတညျးဖွငျ့ ကုဒျရိုကျနိုငျမညျဖွဈပွီး အခွားသော ထုတျကုနျမြားပျေါတှငျ အသုံးပွုစနေိုငျမညျဖွဈသညျ။
HUAWEI ARK Compiler သညျ Android ၏ virtual machine နှငျ့ တနျးတူအသုံးပွုနိုငျသညျ့ ပထမဆုံးသော static complier ဖွဈသညျ။ ထို့ကွောငျ့ developer မြားအား မြားပွားပွီး အဆငျ့မွငျ့မားသညျ့ ဘာသာရပျမြားအား စကျကိရိယာအတှငျးသို့ machine code အဖွဈသို့ ပေါငျးစညျးစနေိုငျမညျဖွဈသညျ။ မြားပွားသော ဘာသာစကားရပျမြားအား တဈနရောတညျး၌ စုစညျးစရေနျ အထောကျအကူပွုခွငျးဖွငျ့ HUAWEI ARK Compiler သညျ developer မြား၏ ထုတျကုနျစှမျးအား ကောငျးမှနျစှာ တိုးတကျစမေညျဖွဈသညျ။
တီထှငျသူမြား၏ အစီအစဉျ နှငျ့ ဂဟေစနဈတိုးတကျမှု
Developer ညီလာခံတှငျ Huawei သညျ Harmony OS နှငျ့ ၎င်းငျး၏ kernel တို့နှငျ့ ပတျသကျပွီး ကွညောသှားသညျ။ HarmonyOS 1.0 သညျ ယခုနှဈနှောငျးပိုငျးတှငျ မိတျဆကျသှားမညျ့ smart screen ထုတျကုနျမြားတှငျ ပထမဦးစှာ ထညျ့သှငျးသှားမညျဖွဈသညျ။ နောကျ ၃ နှဈ ခနျ့ကွာသညျ့အခါတှငျ HarmonyOS သညျ အကောငျးဆုံးအနအေထားအဖွဈသို့ ရောကျရှိသှားမညျဖွဈပွီး smart devices နှငျ့ wearables မြား၊ HUAWEI Vision နှငျ့ ကားအတှငျးရှိ head unit မြား ကဲ့သို့ ပိုမိုကယျြပွနျ့သညျ့ ထုတျကုနျမြားတှငျပါ အသုံးပွုနိုငျသှားမညျဖွဈသညျ။
HarmonyOS ၏ အောငျမွငျမှုသညျ လငျြမွနျစှာတိုးတကျပွောငျးလဲနသေညျ့ app နှငျ့ developer မြား၏ ဂဟေစနဈပျေါတှငျ မူတညျလြှကျရှိသညျ။ ပိုမိုကယျြပွနျ့စှာ အသုံးပွုနိုငျစရေနျအတှငျ Huawei မှ HarmonyOS အား open-source platform အဖွဈ ကမ်ဘာအနှံ့သို့ ဖွနျ့ခြီသှားမညျဖွဈသညျ။ Huawei မှ open-source foundation နှငျ့ open-source community အားလညျး တညျထောငျသှားမညျဖွဈပွီး developer မြားနှငျ့ ပိုမိုနကျနဲသညျ့ ပူးပေါငျးမှုမြားအား ထောကျပံ့သှားမညျဖွဈသညျ။
တရုတျပွညျသညျ တောငျ့တငျးခိုငျမာသညျ့ app ဂဟေစနဈ နှငျ့ မြားပွားသညျ့ သုံးစှဲသူ အခွစေိုကျသညျ့ ဂဟေ တဈခုဖွဈသညျ။ ထို့အပွငျ Huawei သညျ Harmony OS ၏ အခွခေံအုတျမွဈအား တရုတျပွညျဈေးကှကျအတှငျး၌ ခိုငျမာစှာခသြှားမညျဖွဈပွီး ကမ်ဘာတဈလှားရှိ ဂဟေ စနဈအတှငျးသို့ ဖွနျ့ကကျြသှားမညျဖွဈသညျ။ ဆနျးသဈပွီး ထူးခွားသညျ့ တနျဖိုးမြား ပေးအပျရနျဆိုသညျ့ ဦးတညျခကျြဖွငျ့ Huawei သညျ ၎င်းငျး၏ ပငျမ လုပျဆောငျနိုငျစှမျးမြားဖွဈသော ခြိတျဆကျမှု ၊ ကငျမရာ နှငျ့ AI လုပျဆောငျခကျြမြားအား ဝမြှေသှားမညျဖွဈသညျ။ ဂဟေစနဈအတှငျးရှိ မိတျဖကျမြားနှငျ့ နီးကပျစှာ အလုပျလုပျသှားမညျဖွဈပွီး သုံးစှဲသူမြားအား အကောငျးဆုံးသော အတှအေ့ကွုံ အား ပေးစှမျးနိုငျမညျ့ app နှငျ့ ဝနျဆောငျမှုမြားအား ပေးအပျနိုငျရနျ ကွိုးစားသှားမညျဖွဈသညျ။
Harmony OS သညျ ဆနျးသဈသညျ့ အကြိုးသကျရောကျမှုမြားအား သုံးစှဲသူမြား ၊ မိတျဖကျမြား နှငျ့ developer မြားအတှကျ သယျဆောငျလာမညျဖွဈသညျ။ သုံးစှဲသူမြားအတှကျ ၎င်းငျးတို့၏ ဘဝမြားတှငျ အသိဉာဏျမွငျ့မားသညျ့ အတှအေ့ကွုံမြားအား သယျဆောငျလာမညျဖွဈသညျ။ ကိရိယာမြား ထောကျပံ့နသေညျ့ မိတျဖကျမြားအတှကျ 5G ၊ AI နှငျ့ IoT မြား ကွီးထှားတိုးတကျလာသညျ့ ခတျေတှငျ အားသာခကျြအားမြား ကနဦး လကျဦး ရရှိစနေိုငျမညျဖွဈသညျ။ တဈခြိနျတညျးမှာပငျ HarmonyOS သညျ developer မြားအား နညျးပါးသညျ့ ရငျးနှီးမွှပျနှုံ့မှု ၊ မွနျဆနျပွီး တီထှငျဆနျးသဈသညျ့ ဝနျဆောငျမှုမြားဖွငျ့ သုံးစှဲသူမြားအား ဆှဲဆောငျနိုငျမညျဖွဈသညျ။
Richard Yu မှ “ ကြှနျတျောတို့ Harmony OS က ဒီလုပျငနျးခှငျကို ပွနျလညျအားကောငျးလာစနေိုငျပွီး ဂဟေစနဈအား ကွှယျဝကောငျးမှနျလာစမှောဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ရညျမှနျးခကျြကတော့ သုံးစှဲသူတှကေို တကယျ့ကို ကောငျးမှနျပွီး မြားပွားတဲ့ အတှအေ့ကွုံတှကေို ရရှိစလေိုတာဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ အနနေဲ့လညျး ကမ်ဘာတဈလှားမှာရှိတဲ့ developer တှကေို ကြှနျတျောတို့နဲ့အတူ လကျတှဲပွီးကော ဒီဂဟေ စနဈပိုမို တိုးတကျကောငျးမှနျအောငျ ပွုလုပျဖို့ ဖိတျချေါခငျြပါတယျ။ အားလုံးအတူပူးပေါငျးပွီးတော့ အသိဉာဏျမွငျ့မားတဲ့ အတှအေ့ကွုံတှကေို သုံးစှဲသူတှကေို အတူတဈကှ ပေးအပျနိုငျဖို့ အတူတဈကှ ကွိုးစားရနျ ဖိတျချေါခငျြပါတယျ။” ဟု ပွောကွားခဲ့သညျ။
MyTech Myanmar2019-08-11T12:42:39+06:30August 11th, 2019|Huawei, Mobile Phones, News|
60x Zoom, 12GB RAM, SD855+ တို့နဲ့ Realme X3 SuperZoom ကို ဥရောပမှာကွညော
5G Modem နဲ့ Mid-range ခဈြပျဆကျအသဈ Samsung Exynos 880 ကိုမိတျဆကျ
Motorola ကိုယျတိုငျ Leak လိုကျမိတဲ့ Moto G Fast စမတျဖုနျးသဈ
Fortnite ကို 90fps အပွညျ့နဲ့ Run နိုငျတဲ့ ပထမဆုံး Android ဖုနျးတှဖွေဈလာတဲ့ OnePlus 8 Series
Microsoft Surface Duo ရဲ့ Stylus နဲ့ ပတျသကျတဲ့သတငျးအခြို့ ထှကျပျေါလာ
၃သိနျး ဝနျးကငျြကနေ စတငျကသြငျ့မယျ့ Redmi 10X Series ကို ကွညောပွီ
Google Files ကို Play Store မှာ Download ပွုလုပျမှု သနျး ၅၀၀ ပွညျ့သှားပွီ